HANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO NY FINOANA | FJKM Amboniloha
Fomba fanao mahazatra saika iraisan’ny rehetra ny manao jery todika ny lasa sy manao vina hibanjinana ny ho avy rehefa tonga ny faran’ny taona sy ny fiandohan’ny taona. Antenaina fa anisan’izay mpanatanteraka izany ianao mpamaky ! Tamin’izay zava-nokinasa dia misy ny tontosa nefa misy koa ny tsy tanteraka. Mampahery anao ny Tompo, mampahatsiaro anao hisaotra sy hanome voninahitra Azy amin’izany rehetra izany. Nitanatana ny fiainanao Izy nandritra iny taona 2015 iny ary ny zavatra rehetra dia niara-niasa hahasoa anao sy ny ankohonanao.
Saintsaino anie e : Namonjy sy nanavotra anao Izy ka nampiposaka ny Fahazavany taminao raha sendra niraparapa tanaty aizin’ny olana maro samihafa ianao (Isa.60, 1). Niaro anao tamin’ny loza sy ny fakam-panahy ka mbola nampijoro anao ho mpanompo mahatoky Azy Izy. Nanome anao ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana ho enti-miatrika ny fiainana Izy, eny, nanolo-tsaina sy fahendrena ho anao Izy ka nanoro sy nitari-dalana anao hatrany amin’izay lalana tokony nizoranao. Tsy ny herin’ny tenanao no nahavonjy anao fa ny sandriny mahery koa tandremo ny mirehareha ho nahavita tena irery fa raha mirehareha ianao dia aoka ho Jehovah no ho reharehanao ( 1Kor.1, 31 ; ampitahao Sal.103: « Misaora an’i Jehovah ry fanahiko; ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra…”).
Ny zavatra mampalahelo indraindray dia toa tsy sahy mijoro amin’izany fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra izany isika Kristiana izay ambara fa mpino ankoatr’izay atao any am-piangonana. Efa nahazo anao ve izany ? Manadino na Menatra ny hijoro ho FAHAZAVANA eo amin’izao tontolo izao fa miray volo aminy indray ka manome voninahitra izao tontolo izao sy manaraka ny fombany izay tsy manome voninahitra an’Andriamanitra velively. Ohatra : miara-mifaly sy mikorana ao anatin’ny fidorohana zava-mahadomelina toy ny fisotroan-toaka sy ny fanao ratsy manaraka azy rehefa misy fahombiazana na fahasoavana voaray (« Arosage » e !) ; manatitra fanatitra amin’ny fanompoan-tsampy amin’ny endriny maro sy amin’ny toerana samihafa: doany….Ataovy an-tsaina fa rehefa tsy manome voninahitra an’Andriamanitra ianao dia manalabaraka ny Anarany.
Ô ry mpamaky malala, tsarovy ny Mpanao anao izay tsy naha lany ritra anao fa mbola nahavelon’aina tra-pamonjena anao, Ilay niandohanao ary mbola hiafaranao. Nohariana hanome Voninahitra Azy ianao ka aoka hanao izany amin’ny fahatsorana toy ny zaza (Mat.21,16) « Aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao ; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranao ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina » (Rom.12,2). MITSANGANA MIHAZAVA. MANOMEZA VONINAHITRA SY HERY HO AN’I JEHOVAH. LAZAO AMIN’NY MANODIDINA ANAO FA JEHOVAH NO MPANJAKA (Isa.60,1 ; 1Tan.16,28), Andriamanitra MAHAGAGA, MAHERY, MPANOLO-TSAINA, RAIN’NY MANDRAKIZAY, ANDRIAN’NY FIADANANA. Taomy izay rehetra mifanerasera aminao hanome voninahitra Azy. Ambarao fa tsy ho diso fanantenana izy raha manao izany. « izay lazain’Andriamanitra dia hainy atao tokoa »(Rom.4,20.21). Ny Soratra Masina dia milaza fa Izay manatitra fanati-pisaorana no manome voninahitra an’Andriamanitra ; ary izay mitandrina ny lalany no hanehoany ny famonjeny (Sal.50,23)
Meteza ho irak’Andriamanitra ianao hanambara ny famonjena efa vitany teo amin’ny fiainanao sy ny fanomezany toky fa mbola homba izay rehetra manome voninahitra Azy Izy. Hoy Jehovah : « Izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka » (1 Sam.2,30)
Fotoana izao, Tapaho ny hevitra, SAHIA , aza matahotra na miahanahana. OMEO VONINAHITRA NY TOMPONAO na tsy hanao izany ary ny hafa, na tsy ankasitrahan’ny hafa toy ny namanao aza izany. Omeo voninahitra Izy amin’ny fotoana rehetra ANKEHITRINY, AMIN’NY HO AVY, NA AIZA NA AIZA misy anao, na any am-pianarana na any am-piasana….. Momba anao mandrakariva Izy. Ataovy ao anaty sady fototry ny Vinanao izany. “Fa Izy no nihavian’izao zavatra rehetra izao, ary Izy no mihazona azy, sady Izy koa no antony. Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Amena. (Rom.11, 36)